Madaxweyne Farmaajo waxa uu Madaxweyne Xi Jinping ku bogaadiyey dib u habaynta...
Farmaajo oo codsi hor-dhigay guddi ka socday Qaramada Midoobay
Soomaliya 22.01.2020. 17:46
Tiradda danjireyaasha uu sanadkan 2019 qaabilay Farmaajo
Soomaliya 25.12.2019. 17:02
Farmaajo iyo Khayre oo wajahaya "caqabadihii ugu waynaa noloshooda"
Soomaliya 25.11.2019. 11:57
Villa Soomaaliya oo fahfaahin ka bixisay kulanka Farmaajo iyo Uhuru
War Saxaafaded 14.11.2019. 18:13
Farmaajo oo qaabilay danjireyaal cusub una sameeyay balanqaad
Soomaliya 16.10.2019. 15:20
Farmaajo oo ka hadlay doorashada 2020 xili looga digayo muddo kororsi
Soomaliya 26.09.2019. 06:30